Izinqolobane Zokunethezeka - IntoKildare
IKildare inehhotela lamahhotela aphambili anezinkanyezi ezinhlanu, elifanele ukugubha leso sikhathi esikhethekile noma iholide engalibaleka.
Ulinde leso senzakalo esihle kakhulu ukuze siphume sonke ekubalekeni kwezinkanyezi ezinhlanu? Khetha ohlwini lwezindawo ezinhle kakhulu ze-Kildare ukuze umake umcimbi noma mhlawumbe ukuvele uziphathe kahle ngobusuku bokunethezeka. Ulindeni?
IBarberstown Castle iyihhotela lezinkanyezi ezine elinezindlu ezine kanye nenqaba yomlando yekhulu le-13, kuphela imizuzu engama-30 ukusuka eDublin City.
I K Club
I-K Club iyindawo yezwe enesitayela, eboshelwe ngokuqinile ekwamukeleni izivakashi zase-Ireland ezindala ngendlela ekhululekile nejabulisayo.